UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTHENGA KWI-Czech Republic | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA IRiphabliki yaseCzech, ukuFudukela kwezoQoqosho ngokutyala imali yokuhlala kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ukuhlala ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech,
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye neVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho kwiCzech Republic:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiCzech Republic
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela kwiRiphabhlikhi yaseCzech
● IVisa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech
● Ipasipoti yesibini evela eCzech Republic
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali kwiRiphabhlikhi yaseCzech basebenze ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunikezela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala okwesibini ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala kwakhona kubabini ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala isigxina ngotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ukuhlala okwethutyana ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, Ubummi ngotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, Ubummi ngotyalo-mali iinkqubo kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ubumi ngenkqubo yotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ubumi besibini ngotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, ubumi bobabini ngotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, iinkqubo zobumi boqoqosho kwiRiphabliki yaseCzech Ubummi ngesikimu sotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ubummi ngezikimu zotyalo-mali eCzech Republic, ipasipoti yesibini kwiRiphabliki yaseCzech, iinkqubo zokundwendwela yesibini eCzech Republic, inkqubo yesibini yepasipoti eCzech Republic, ipasipoti yesibini yesibini eCzech Republic, ukuhlala kunye nepasipoti yesibini eCzech. IRiphabhlikhi, ipaspoti yesibini kwilizwe laseCzech, ipasipoti yesibini kutyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ipasipoti yesibini yokuba ngummi kwiRiphabliki yaseCzech, iskim sepasipoti yesibini kwiRiphabliki yaseCzech, izikimu zepasipoti zesibini eCzech Republic, iVisa yegolide kwiRiphabliki yaseCzech, iiVisa zegolide eCzech Republic, iinkqubo zevisa zegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech, inkqubo yegosa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech, yesibini visa visa kwiRiphabhlikhi yaseCzech, inkqubo yesibini yegosa yeg visa kwiRiphabliki yaseCzech, i-visa yegolide ezimbini kwiRiphabliki yaseCzech, ubumi kunye nevisa yegolide kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eCzech IRiphabhlikhi, ubumi bevisa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech, isikimu sevisa segolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech, izikimu zevisa zegolide kwiRiphabliki yaseCzech.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech ngenkxaso eyongezelelweyo.
Ubuncinci botyalomali kwiRiphabhlikhi yaseCzech yokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 2,850,000
Intshayelelo IRiphabhlikhi yaseCzech kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo mali
IRiphabhlikhi yaseCzech ngomda obanzi yenye yezona nkcaso zinomtsalane kwi-Yurophu esembindini yokukhutshwa. Isityebi kwinkcubeko namasiko kwaye saziwa ngendalo yaso ethandekayo kunye neendawo zokutyibilika ekhephini, inika imozulu entle kunye nendlela yokuphila yabantu abangaqhelekanga abalindele ukuhlala apha, kunye nokufumana amathuba engcali. IsiCzech sithethwa kulo lonke ilizwe, sitshintshe isincomo okanye ulwimi oluqala ngesithili esinye ukuya kwesinye. Ulwimi lusebenzisa oonobumba besiLatin ngokulandelelana kwaye lufana kakhulu nolwimi lwaseSlovak 'ayilolona lwimi lufunwayo ukuba lufundwe' nangona kunjalo abahlali baseCzech bangabamelwane kwabo bantu banomdla wokuqhelana nolwimi lwabo ukuze bathethe ngokuthe chu ukubacothisa. kungcono ukudibana nawe phakathi.
I-Czech ixabisa kakhulu ubudlelwane bosapho. Abagcini, abantwana kunye nabazukulwana bahlala befumana ithuba lokwenza ixesha elilahlekileyo kunye nezidlo zentsapho zibalulekile kwindlela eqhelekileyo yobomi. Ngaphezu koko, ngaphandle kokuphucula okwangoku kunye notshintsho olubanzi kwixesha elide, iintsapho zibambe ukubaluleka okukhulu kwimihla ngemihla yeCzechs. Iindleko zokufumana amava kwiRiphabhlikhi yaseCzech ziphantsi kakhulu xa kuthelekiswa namazwe asentshona Yurophu, kwaye iPrague ithobeke ngokunyanisekileyo ngokubhekisele kwimimandla yaseYurophu. Ixabiso eliqhelekileyo eliqhelekileyo lezinto ezisisiseko kwizifundo ezingekho mthethweni kwiRiphabhlikhi yaseCzech zijikeleze i-400 EUR qho ngenyanga ngokucacileyo, ixhomekeke kwiindlela zakho zokulawula imali.
Oku kubandakanya ukulungeleka, ukutya, kunye nezothutho. Iindleko zinokwahluka njengoko kubonisiwe yindawo okuyo. IRiphabhlikhi yaseCzech inendibano ende ende yokufunda kakuhle. Ikholeji yaseCzech yaseprayimari, iYunivesithi yaseCharles ePrague, yasekwa e1348 njengekholeji eyintloko kwiYurophu eseMbindini. Isakhelo sophando lwaseCzech sisebenza ngokufanelekileyo kunye ne-ECTS (Inkqubo yokuDluliswa kweKhredithi yaseYurophu), ke iikhredithi ozifumanayo kwezi zifundo uziphumelelayo zinokudluliselwa kwezinye iiyunivesithi zaseYurophu. Imibutho emininzi kwihlabathi liphela inabancedisi kunye neendawo zokusebenzela kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ke ngekhe kufuneke uxinzelelo ngokungabinamsebenzi emva kokugqiba iimviwo zakho. Imibutho emininzi yongeze inike izikhundla zokungena kwabafundi ezinokuba yinkxaso yobungcali engaqhelekanga! Isisiseko esisisiseko sabafundi abangaqhelekanga ukubonelela ngolwimi lwabo lweenkobe olunokuba ngumthombo oluncedo wengeniso esecaleni.
Lelizwe lesithandathu elikhuselekileyo emhlabeni. Inokutya okungathethekiyo, ilogger, abantu abakhulu kwaye ikwinqanaba lokuqala elingaqhelekanga lokujikeleza iYurophu. Ngenxa yommandla ekugxilwe kuwo, uya kuba nethuba lokundwendwela amazwe kunye neendawo ezisezidolophini ngekhe uphinde ufumane ithuba lokundwendwela kwakhona. Akukho mathuba athile okuphila kakuhle kwi-Czech Republic. Ukuba uyagula, nangona kunjalo, akukho sizathu sinyanzelekileyo soxinzelelo, njengoko ii-ofisi zoncedo lwezonyango ubukhulu becala zinika ulindelo olukhethekileyo kunyango nokhathalelo. IRiphabhlikhi yaseCzech inesakhelo esifanelekileyo seeklinikhi zikarhulumente nezabucala kunye neendlela zeengcali, kwaye wonke umntu osetyenziswayo kwisizwe ngenxa yoko ujika abe ngumntu ovela kwisakhelo esipheleleyo sokugubungela unyango. Eminye imibutho emikhulu kwihlabathi liphela inokukunika isicwangciso sokhuselo sabucala ngasese kunokuba, okanye ngaphandle kwayo, i-inshurensi ngokubanzi yempilo. Oku mhlawumbi yenye yezona zinto zibalulekileyo oza kuzenza njenge pat-pat, kwaye leyo yeyona ndleko yesiqhelo yezinto ezisisiseko. Umahluko kunye nezizwe ezininzi eYurophu, iRiphabhlikhi yaseCzech iya kuthi ngokubanzi ibe phantsi ngokubhekisele kwiindleko zeemveliso eziqhelekileyo kunye neenkonzo. Ukuba ucwangcisa ukuya kushishino kwiRiphabhlikhi yaseCzech, izinto ezintle koku kukuba zilula ngokumodareyitha ukuseta nokuqala. Zimbini iindlela onokuthi uzithathe, enye ibe yi-SRO apho lonke uxanduva luthatyathwa kuwe, okanye uthenga imvume yokuthengisa kwaye uwathathe ngokwakho nawaphi na amatyala. Konke oku kulula ngokuphakathi, ukuba ungathetha ngokungathandabuzekiyo kunye namashiti ekufuneka uthethe nawo. Enye yee-engile ezintle kunye nomtsalane weRiphabhlikhi yaseCzech yindawo ekhwankqisayo nenenkqubela phambili kuluntu luphela. Kukho kwimeko nganye iimfumba zemisebenzi kunye neendawo ezininzi zokuhamba. Nokuba ukwiiklabhu kunye neendawo zokutyela, okanye ungqiyame ngaphezulu kokuzilolonga ngaphandle, akukho kunqongophala kokuzilolonga kwiRiphabliki yaseCzech.
Ubomi kwiRiphabliki yaseCzech
Ngabemi abanenkcubeko engenakuphikiswa, iRiphabhlikhi yaseCzech ngoku inenxalenye enkulu ye1,000,000 yabantu bangaphandle abahlala ngaphakathi kwayo.
IRiphabhlikhi yaseCzech idume ngokulala kwayo; Isizwe sibambe isihloko sokusetyenziswa kotywala ngokubalulekileyo ngomntu ngamnye kwihlabathi lonke kwiminyaka engama-23 edlulileyo!
Isizwe sinokulindela okuphezulu kukhathalelo lonyango, kumgangatho kunye namanye amazwe aseYurophu. Uqeqesho lukarhulumente luyalelwa ngokupheleleyo eCzech, i-ex-pats engapheliyo ithathe isigqibo sokuthumela abantwana babo kwizikolo zehlabathi.
Imbali yesiphithiphithi seRiphabhlikhi yaseCzech, ngakumbi utshintsho ukusuka kurhulumente wobusoshiyali ukuya kwinkqubo yenkululeko esekwe kwinkulungwane yesibini yamashumi amabini, lenze eli lizwe lashiya isiphako salo esizweni, lisenza injongo enomdla ekuhlaleni. Inqaku lethu linika umzobo omfutshane wobume obungokwembali beRiphabhlikhi yaseCzech kwaye unika idatha ephambili kwezentlalo ukuze baphile apho.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiCzech Republic
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Emva kweminyaka emi-5 yokuphila
Emva kweminyaka eyi-10 yokuphila
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseCzech Republic
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala iRiphabliki yaseCzech
IRiphabhlikhi yaseCzech, ikumbindi weYurophu kwaye lilungu elipheleleyo le-EU kunye neSchengen Zone. Ubuhle bendalo obumangalisayo belizwe buqhayisa ngeentaba, iintaba kunye nemilambo. Iziko elidumileyo lembali yedolophu yasePrague ibingumqolo weefilimu ezininzi zevidiyo.
Kutshanje iRiphabhlikhi yaseCzech isungule inkqubo ekhethekileyo yokuhlala ngokujolisa kubatyali zimali abaza kuba negalelo kuqoqosho lwelizwe. Inkqubo inexesha elifutshane kakhulu kutyalomali lwasekhaya kunye nemvume yokuhlala kwamalungu osapho. Ngapha koko, ayilulo lonke utyalomali ekufuneka lubekhona ngemali ezinkozo. Ezinye iiasethi zinokufikelela kuma-60%.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eCzech Republic
Abantu bendalo kunye neenkampani bobabini banelungelo lokufaka isicelo se-visa yotyalo-mali. Ukuya kuthi ga ku-5 abalawuli abaphezulu banelungelo lokufumana imvume yokuhlala kutyalomali ukuba umfaki sicelo yinkampani. Iivisa zotyalo mali ezifikelela kwiminyaka emi-2 zikwakhona kubanini zabelo.
Amaxesha okuqhubekeka amafutshane kakhulu: abatyali mali banokufumana imvume yabo yokuhlala ngeentsuku ezingama-30 ukuya kuma-45 zokungenisa onke amaxwebhu afunekayo.
Olunye uncedo kubatyali begolide baseCzech kukuba abafaki-zicelo bangafaka izicelo zabo kummeli waseCzech welizwe abahlala kulo ngoku.
Abafakizicelo abahlala kwiRiphabhlikhi yaseCzech kwaye bafuna ukutshintsha imvume yabo yokuhlala bangafaka isicelo ngqo kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezangaphakathi ..
Abo banqwenela ukufumana indawo yokuhlala ngokusisigxina eCzech banokwenza oko emva kweminyaka emi-5 yokuhlala ngokuqhubekayo․ Ubummi baseCzech bunokufunyanwa emva kweminyaka eli-10 yokuhlala kweli lizwe.
Imfuneko yemali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Kukho iimfuno ezi-3 ekufuneka zizalisekisiwe kwisicelo esiphumeleleyo:
Yenza ubuncinci imisebenzi yexesha elipheleleyo engama-20 yekota yokuhlala (yabemi be-EU);
Utyalo-mali okungenani lwe-CZK 75 yezigidi (cca. EUR2,850,000) kufuneka yenziwe. Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 zotyalo-mali zinokunikezelwa kwezinye iiasethi: izindlu nomhlaba, ulwazi okanye izixhobo zomzimba;
Isicelo kufuneka silandelwe sisicwangciso seshishini.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha kwiRiphabliki yaseCzech ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngenkxaso yokuba ngabemi ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech kunye namanye amathuba otyalo mali kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech okanye iVisa yaseGolide esuka eCzech Republic okanye ubummi ngotyalo-mali oluvela kwiRiphabhlikhi yaseCzech okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu kwiRiphabliki yaseCzech, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba uyafuna ukuseka inkampani kwiRiphabliki yaseCzech okanye kunxweme, izibonelelo zabasebenzi kwiRiphabliki yaseCzech nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi nakwiRiphabhlikhi yaseCzech nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo yabemi baseCzech Republic:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena KwiRiphabhlikhi yaseCzech, abatyali abafikelelekayo botyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye nenkampani yabathengi efikelelekayo yokungena kwilizwe laseCzech Republic.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukuya kumazwe angama-37.
Ubummi ngotyalo-mali ukusuka kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eCzech Republic ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini ngokusekwe kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eCzech Republic.
Iinkqubo zevisa zegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eCzech Republic ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eCzech Republic ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngeNdawo yokuThengisa izindlu
Sinikezela ngenkxaso kutyalomali lokuthengiswa kwezindlu kwiRiphabliki yaseCzech ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngenxa yoBumi ngokuTyala imali kwiRiphabliki yaseCzech. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu kwiRiphabliki yaseCzech abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle kwiRiphabliki yaseCzech, befumana eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwezindlu kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngokutyala imali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kwiCzech Republic.
Kufuneka uyazi-ICzech Republic Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona ngeGqwetha loTyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu acacisiweyo ukuze ube yimpumelelo yokuhlala kwakho ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala kwiRiphabliki yaseCzech kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka kwiRiphabhlikhi yaseCzech okanye kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kubaxumi ukuze bafumane iPhepha-mvume lokuhlala eRiphabhlikhi yaseCzech kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo ngenxa yeRiphabhlikhi yaseCzech, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Ukuguqulelwa kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali kwiCzech Republic. Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye nevisa yegolide iya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu okuhlala kwakho nawosapho lwakho afumane isicelo sokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, siya kuwugcwalisa ngabasemagunyeni abafanelekileyo baseCzech Republic.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech sivunyiwe, sabelana nawe ngeendaba ezimnandi kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kwi-Czech Republic kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini kwi-Czech Republic:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali ze Czech Republic azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka okanye eCzech Republic.
Kuhlala ngokweenkqubo zotyalo-mali lweCzech Republic azinikezelwanga ukugadwa ngobuchwephesha kwiRiphabhlikhi yaseCzech okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali kwi okanye ukusuka okanye ukuya kwiRiphabliki yaseCzech.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali kwiCzech Republic azinikezelwa ngayo nayiphi na into engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho kwiCzech Republic.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali kwiRiphabliki yaseCzech ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza kwiCzech Republic.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali ze Czech Republic ayisiyonto yamashishini ajongene nezixhobo eziyingozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eCzech Republic.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeRiphabliki yaseCzech ayifumaneki kubantu abathile kwiRiphabliki yaseCzech ejongene norhwebo, ugcino kwiRiphabliki yaseCzech, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo kwiRiphabliki yaseCzech ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo kwiCzech Republic.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Umphakathi waseCzech ayibonelelwa ngabantu abajongana neManyala kwiRiphabhlikhi yaseCzech.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eCzech Republic abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eCzech Republic.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi beRiphabhlikhi yaseCzech kunye neKYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva kuko nakuphi na ukwaliwa kwabasemagunyeni kwiRiphabliki yaseCzech ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali kwiCzech Republic.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiCzech Republic nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo mali kwiRiphabliki yaseCzech yotyalo-mali, yokufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu kunye nomhlaba eCzech Republic.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseRiphabhlikhi, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo esihlala kuyo sisebenzisa iinkonzo zotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech sibonelela ngamaxabiso aphantsi, ngezinga lempumelelo elifikelelekayo kwiRiphabliki yaseCzech.
Sithathe iminyaka yamava okuHlala kwakhona kwiRiphabhlikhi yaseCzech sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo kwiRiphabhlikhi yaseCzech.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye neearhente zomthetho kwiRiphabhlikhi yaseCzech ezinikezela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iRiphabhlikhi yaseCzech kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho kwiRiphabhlikhi yaseCzech nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu kwiRiphabliki yaseCzech
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya neRiphabhlikhi yaseCzech, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzelayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala imali kwiRiphabliki yaseCzech
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beCzech Republic, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuHlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa kwiRiphabliki yaseCzech
Inkqubo yeMvume yokuSebenza kwiRiphabliki yaseCzech
Ukuhlala okwethutyana kwiRiphabliki yaseCzech
Indawo yokuhlala isigxina eCzech Republic
Ubumi base Czech Republic
Izindlu zoonozakuzo kunye neeNdlu zoonozakuzo base Czech Republic
Irhafu kwiRiphabliki yaseCzech
Ukuhlala kwakhona ngoTyalomali kwiRiphabliki yaseCzech kunye nezinye iiNkonzo
Sibhale uluhlu lweenkonzo ezimbalwa esizibonelelayo kwiRiphabliki yaseCzech malunga neemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela nosapho lwakho kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngokutyala, thina njengeqabane lakho kwiRiphabhlikhi yaseCzech, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo kwiRiphabliki yaseCzech ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiCzech Republic, ongenakufumana phantsi kwesinye isambrela esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi beRiphabhlikhi yaseCzech esenza isitolo sokuma kwiRiphabliki yaseCzech kunye namazwe ayi-106. .
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nakwihlabathi liphela kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini kwiCzech Republic ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana kwiRiphabhlikhi yaseCzech nakwamanye amazwe.
Inkampani e Czech Republic
Singakunceda bhalisa inkampani kwiCzech Republic okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani kwiRiphabhlikhi yaseCzech zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eCzech Republic uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yobuqu kwiCzech Republic kunye neakhawunti yebhanki yenkampani kwiRiphabliki yaseCzech, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula kwiCzech Republic
Ngaba ufuna ukubonisana neCzech Republic, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eCzech Republic Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech kwiRiphabliki yaseCzech okanye izisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali IRiphabhlikhi yaseCzech ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho kwiCzech Republic ukuqala kwangoko kwiCzech Republic.
Iinkonzo zabasebenzi kwiRiphabliki yaseCzech
yethu inkampani yezabasebenzi eCzech Republic inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba kwiRiphabliki yaseCzech free.
Iifowuni ezinyanisekileyo zeRiphabhlikhi yaseCzech
Iinkqubo zeefowuni zeshishini kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye amanani abonakalayo eCzech Republic Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali kwiCzech Republic
Accounting, ngenxa yenkuthalo e Czech Republic kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo kwiCzech Republic
Ukuseta ishishini kwiCzech Republic
Emva kokuhlala ngokutyala imali kwiCzech Republic, ukuseta ishishini kwi Umphakathi waseCzech.
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT kwiRiphabliki yaseCzech
Uyilo lwewebhu kwiCzech Republic
Uphuhliso lwezorhwebo kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Uphuhliso lwewebhu kwiCzech Republic
Uphuhliso lweBlockchain kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Uphuhliso losetyenziso kwiRiphabliki yaseCzech
Uphuhliso lweSoftware eCzech Republic
I-SEO kwiRiphabliki yaseCzech
Amagqwetha okuHlala kwakhona ngoTyalo mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni ngokwesisombululo soTyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kwiRiphabhlikhi yaseCzech, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho kwiRiphabliki yaseCzech ineearhente zokufudukela ezikwiCzech Republic, saziwa ngokuhambisa iinkonzo ezingcono kubathengi amava eRiphabhlikhi yaseCzech anezisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunika izisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala kwiRiphabhlikhi yaseCzech, kwimvume yakho yokuhlala eCzech Republic yamkelwe.
Amandla egqwetha leRiphabhlikhi yaseCzech ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngokuHlala kwakhona ngabaceli botyalo mali kwiRiphabliki yaseCzech. Ukuba uhlala kwiRiphabhlikhi yaseCzech okanye uceba ukutyelela iRiphabliki yaseCzech, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani kwiRiphabhlikhi yaseCzech kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla weCzech Republic. Kuxhomekeka kwilizwe lokuhlala kwakho, kufanele ukuba kukhutshwe umthetho okanye kumiswe ngokusemthethweni ngummeli weRiphabhlikhi yaseCzech.
Imibuzo ebuzwa qho-Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali kwiRiphabliki yaseCzech
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali kwiCzech Republic?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngotyalo-mali kuqoqosho lweRiphabhlikhi yaseCzech ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech, ukuhlala ngu Inkqubo yotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech. Iiarhente kwiRiphabhlikhi yaseCzech, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukayo kwiCzech Republic.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kwiCzech Republic | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali kwiCzech Republic | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali kwiCzech Republic | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali kwi-Czech Republic | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali kwiCzech Republic
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali kwiCzech Republic?
Ubummi ngotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, bunokuchazwa njengokufumana ubumi beRiphabhlikhi yaseCzech ngotyalo-mali kuqoqosho lweRiphabhlikhi yaseCzech ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl.njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech exhaswa bubummi ziinkonzo zotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech. Abacebisi beRiphabhlikhi yaseCzech, basebenza njengabemi abangcono ngabameli botyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech, kunye neefem zokubonisana nabantu abavela kwamanye amazwe kwiCzech Republic.
Iinkonzo zokungena kwabatyali ezifikelelekayo kwiRiphabhlikhi yaseCzech | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela kwiRiphabliki yaseCzech | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eCzech Republic | Utyalomali olungenakufikeleleka kumagqwetha eCzech Republic | Abatyali mali abafikelelekayo kubaphambukeli kwiRiphabhlikhi yaseCzech | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo kwiRiphabliki yaseCzech
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini kwiCzech Republic?
Ipasipoti yesibini kwiRiphabhlikhi yaseCzech, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni beRiphabhlikhi yaseCzech ngotyalo-mali kuqoqosho lweRiphabhlikhi yaseCzech ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini kwiRiphabhlikhi yaseCzech, inkqubo yesibini yepasipoti kwiRiphabhlikhi yaseCzech exhaswa ziinkonzo zepasipoti yesibini kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ngamagqwetha esibini eepasipoti eCzech Republic, awona magqwetha epasipoti aphezulu kwiRiphabliki yaseCzech kunye nabacebisi beepasipoti besibini kwiRiphabliki yaseCzech, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela yesibini kwiRiphabliki yaseCzech. Iifemu zokubonisana nabantu abavela kwamanye amazwe kwiCzech Republic.
Iinkonzo zokundwendwela yesibini zeCzech Republic | Iiarhente zokundwendwela yesibini kwiCzech Republic | Amagqwetha esibini epasipoti kwiRiphabhlikhi yaseCzech | Igqwetha lesibini lokundwendwela kwi-Czech Republic | Abacebisi bepasipoti yesibini kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Yintoni inkcazo yevisa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech?
I-visa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala kwiRiphabhlikhi yaseCzech ngotyalo-mali kuqoqosho lweRiphabhlikhi yaseCzech ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech, inkqubo yegosa yegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech exhaswa ziinkonzo zevisa zegolide kwiRiphabhlikhi yaseCzech, ngamagqwetha ethu agqwesileyo egosa laseCzech Republic, abameli bamagqwetha egolide kwiRiphabliki yaseCzech kunye nabacebisi abagqwesileyo begosa baseGreek kwiRiphabliki yaseCzech. Iifemu zokubonisana nabantu abavela kwamanye amazwe kwiCzech Republic.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeCzech Republic | Iiarhente zevisa ezimnandi eCzech Republic | Amagqwetha egosa egolide eCzech Republic | Amagqwetha egosa egolide kwiCzech Republic | Abacebisi be visa beRiphabhlikhi yaseCzech
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala imali kwiCzech Republic?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala kwi-Czech Republic yi-EUR 2,850,000.
Ngaba uyayibonelela ngenkxaso yezomthetho kwiRiphabhlikhi yaseCzech yokuHlala kwakhona ngokutyala imali?
Ewe, igqwetha lethu kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye neearhente kwiRiphabhlikhi yaseCzech zinika inkxaso yokuHlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kuyabiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech kunye nokuhlala kwakhona ngokweemfuno zengxowa mali yotyalo-mali kwiRiphabhlikhi yaseCzech yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngoTyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokwenza isicelo sokuhlala ngokutyala imali kwiCzech Republic okanye kwi-visa yomtyali mali kwiRiphabliki yaseCzech?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech ukusuka eAfrika, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech. Ukusuka eMzantsi Melika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukusuka eMalaysia, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukusuka eBangladesh, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukusuka eIndonesia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech ukusuka eSri Lanka, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabliki yaseCzech ukusuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukusuka eIndiya kunye nokuHlala kwakhona ngokutyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali kwiRiphabliki yaseCzech
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Amagama abalulekileyo ekuhlaleni ngokuTyala imali kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Hlanganisa kwi ISebe loFuduko lweCzech Republic , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eCzech Republic